किन हटाउन लगाए सलमानले आफू अभिनित फिल्मबाट अर्जितको गीत ? | Lifemandu
किन हटाउन लगाए सलमानले आफू अभिनित फिल्मबाट अर्जितको गीत ?
एजेन्सी । ‘पृथ्वी’ फिल्ममा नेपालका सुपरस्टार अभिनेता राजेश हमालले बोलेको ‘साथीहरूका लागि यो हात सलाम हो, दुश्मनहरूका लागि यो हात फलाम हो’ संवाद निक्कै चर्चित छ।
तर कुरा राजेश हमालको नभई बलिउड अभिनेता सलमान खानको हो। सलमानको मित्रता र दुश्मनी लघभग हमालको यही संवादले प्रष्ट पार्छ। उनी आफ्ना साथीहरूका लागि जस्तोसुके सहयोग गर्न तत्पर रहन्छन भने अर्कोतीर दुश्मनी साँध्नेहरूलाई कहिल्ये माथफि दिदैनन्।
बलिउडका अहिलेका चर्चित गायक अर्जित सिंह यसका पछील्ला उदाहरण हुन्। सलमानले फेरी पनि आफू अभिनित फिल्मबाट सिंहले गाएको गीत हटाउन लगाएका छन्। उनले ‘वेलकम टु न्यूयोर्क’ फिल्मबाट अरजितको गीत हटाउन लगाएका हुन्।
फिल्ममा सलमान केमियो भूमिकामा छन्। निर्माण पक्षले फिल्ममा अर्जितको गीत राख्न चाहेको भए पनि सलमानले उनीहरू हटाउन भनेको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। सलमानले फिल्म निर्माण पक्षलाई अर्जितका अलावा अरू कुनै गायकको स्वरमा सो गीत राख्न भनेको बताइन्छ।
समलान र अर्जित यो दुश्मनी सन् २०१४ बाट सुरू भएको हो। एक अवार्ड सोमा अवार्ड लिएपछि अर्जितले ‘तपाईहरूले निन्द्रा लगाइदिने बनाउनुभयो’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए। जवाफमा सलमानले ‘यसमा हाम्रो कुनै दोष छैन्।यस्ता गत बजिरहे’ भनेर अर्जितको ‘तुम हि हो‘’ गीत गाएका थिए।
यो सिलसिला यसमा मात्र रोकिएन ‘सुल्तान’को गीत पनि सलमानले हटाए। सलमानको यस प्रतिक्रिया पछि अर्जितले आफ्नो गीत नहटाउइदिन आग्रह गर्दै फेसबुकमा स्टाटस समेत लेखेका थिए तर गीत फिल्म अटाएन। पछि अर्जितले स्टाटस हटाएका थिए।
काठमाडौँ । वरिष्ठ हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अभिनित म्युजिक भिडियो बाहिरीएको छ । मदनकृष्ण अभिनित ‘भोकले कोही नमरोस्’ बोलको स्वदेशगानको भिडियो बाहिरीएको हो ।
‘हावा’ गीत लिएर आईन् प्राश्ना शाक्य (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । ‘आवाज देउ’ बोलको गीत गाएर चर्चामा आएकी गायिका प्राश्ना शाक्यको ‘हावा’ गीत सार्वजनिक भएको छ ।
कलंकी चोकमा सवारी चाप हटाउन ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्था लागू
काठमाडौं । कलंकी चोकमा हुने सवारी चाप हटाउन आइतबारदेखि ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्था लागू गरिएको छ ।